सरकारी जागिरे केटाको विवाह : बेहुली ५.५ फिट उचाईकी, बेहुला १० बर्ष जेठा मात्र ३ फिटका ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारसरकारी जागिरे केटाको विवाह : बेहुली ५.५ फिट उचाईकी, बेहुला १० बर्ष जेठा मात्र ३ फिटका !
December 3, 2020 admin समाचार 1971
काठमाडौं । विवाहलाई लिएर विश्वमा अनेकथरी घटनाहरु रहेका हुन्छन् । अहिले त्यस्तै अनौठो घटना बाहिर आएको छ । सोमबार गुजरातमा हजारौं विवाहहरू भए, तर जुननागढमा भएको विवाह सबैभन्दा अनौंठो मानिएको छ ।
त्यहाँ एक ५.५ फिट अग्ली केटीले ३ फिट उचाई भएको केटासँग सात फेरो लिएर अग्नी साँक्षी राखेर विवाह गरेकी छिन् । दुलहीको उमेर २९ बर्ष र दुलहाको उमेर ४२ बर्ष हो । शान्ता मकवाना बच्चैदेखि नै सत्यम सेवा युवा मण्डलको गर्ल्स होस्टलमा बस्छिन् ।
उनले जन्मजात देख्न सक्दिँनन् । तर शान्ताले बीएड गरेकी छिन् । जाम जोधपुर तहसीलका सरकारी शिक्षक रमेश भाई डाँगरले शान्तासँग विवाह गर्ने इच्छा व्यक्त गरेपछि यो बिबाह सम्भव भएको थियो । शान्तालेपनि स्वीकार गरेपछि दुबैको बिहे भएको हो । दुलाह सरकारी विद्यालयका शिक्षक भएको बताइएको छ ।
December 21, 2020 admin समाचार 2336
November 24, 2020 admin समाचार 3460
November 24, 2020 admin समाचार 2399
LEX 18 agenda conversation: Job club (445141)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (418706)
Hello world! (346021)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (318814)